Ngwá ahịa nke Semalt na-eme ka ndị na-adịghị mma na Corpao
Crear una njikọ na ndị ọkachamara na-esite n'echiche na-eme ka ndị ọzọ na-ahụ maka ihe ndị ọzọ. Otu ihe na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ ya - oculos de sol ray ban feminino lançamento. N'aka nke ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-elekọta ndị ahịa, ọ bụrụ na ị na-elebara ndị ọzọ anya. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere SEO, dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa.
Dị ka ihe atụ, el marketing ahịa na-enyere gị aka ịbanye na ahịa gị. En el marketing por correo electrónico, ị nwere ike ịchọta ozi gị na ozi. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị na-eme ka ndị ahịa na-eme ka onye ọ bụla na-enyere gị aka inweta ihe na-eme ka ị na-enwe obi ụtọ. Dị ka ihe dị iche iche na-ele anya na-enyere ndị ahịa azụmahịa aka, ha na-enyere gị aka ịbanye na ndị ọkachamara na-enyere gị aka ịbanye na ya.
El Gerente Senior de Ventas de Ọcha , Ryan Johnson, profundiza na los conceptos dasicos del marketing por correo electrónico dirigido.
Al llevar a cabo la segmentación de marketing de correoñoicoico, na-edebe ihe dị iche iche:
Nke a bụ ngwa ngwa ma ọ bụ na nso nso a onye ahịa na-eji email. Ọ nwere ike igosi gị usoro na oge iji tinye ozi dịka "anyị na-atụ uche gị".
Onye Ahịa na Atụmatụ
Nke a bụ ọdịiche dị n'etiti ihe ụfọdụ ndị na-azụ na ihe ha na-atụ anya ya. Dị ka ọmụmaatụ,onye na-azụta PS4 ga-atụ anya mmelite na egwuregwu ndị na-adịbeghị anya.
Así de rápido o recientemente a cliente se involucra con un correo electrónico. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe na-ezigara "na extrañamos".
Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla n'ime ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, Na-arụ ọrụ, a comprador de PS4 na-eme actualizaciones na jientgos recientes.
Mgbe ị na-agba ọsọ azụmaahịa obodo, ọ dị mkpa mgbe niile iji warara usoro SEO gịna niche ị chọrọ. Nke a nwere ike ime ka mgbasa ozi gị karịa iche. Ụlọ ahịa dị na mpaghara nwere ike iji ojiji nke Google Maps, nke na-enye akandị ahịa na-edepụta ọdịnaya weebụ ha na ịntanetị.
Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dị iche na nwata. E nwere ihe dị iche iche nwere ike ịkpaliteonye ọ bụla n'ime ha kwenye ka ịzụta. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụmụ nwanyị dị mfe ịchọta na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche dịka ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ikom na-echekwa. N'otu aka ahụ, ndị mmadụ nwere àgwà dị iche iche ịzụ ahịa n'oge dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, nwa akwụkwọ agaghị eme nhọrọ yiri nke ahụ n'etitiklas. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka ndị mmadụ na-emepụta mgbasa ozi ezubere iche na mgbasa ozi email.
3. Oge na oge mkpa:
Oge nke izu ma ọ bụ ụbọchị na-emetụta ndị ahịa ngwa ngwa. Dị ka ihe atụ, email izu ụkaMgbasa ozi ekwesịghị iyi ihe yiri mgbasa ozi email Monday. Niche dị iche iche nwere usoro dị iche iche nke itinye ọdịnaya weebụ gị.
4. Ihe Ahịa Ahịa Google:
Ngwaọrụ a bụ Google AdWords. Ọ na-eme ka ndị ahịa nweta ndị ahịa dị otú ahụ site n'ịkwadondepụta nke ndị ahịa gị ugbu a na ịchọta ndị na-ege ntị ọhụrụ. Ngwá ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta atụmatụ nke niche nhụsianya dị mkpa nke dị oké mkpamaka SEO gị na email ahịa.
Email Marketing bụ ụzọ dị mkpa iji ruo ndị ọbịa nke mkpokọta. N'ọtụtụikpe, usoro mgbasa ozi email na-eji ụzọ zuru ezu ezigara mmadụ niile email. Ịme ozi ịntanetị ahụ pụrụ iche ma bụrụ ihe pụrụ iche nye onye ahịaotu n'ime ụzọ iji nwee ihe ịga nke ọma na usoro a. Ihe ọzọ SEO na-enweta site n'ichepụta ahịa email na-agụnye backlinking naogo dị mma.